Dowladda oo Saraakiil sare sare u dirtay deegaannada Galmudug+Sawiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo Saraakiil sare sare u dirtay deegaannada Galmudug+Sawiro
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug waxaa Maanta gaaray saraakiil uu hoggaaminayo Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif,waxaana Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb kusoo dhaweeyey Saraakiisha ciidamada Booliska Soomaaliyeed qeybta Galmudug saraakiisha talisyada,Millateriga iyo Nabadsugida ee ka howlgalla deegaannada Galmudug.
Taliyaha Cidianka Booliskma qeybtooda Galmudug Cabdi Casiis yuusuf Dhagabadan oo kamid ahaa saraakiishii soo dhaweeyey ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin amarada kaga yimaada Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed .
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay in safarka uu ku tegay Dhuusamareeb ay qeyb ka tahay u kuurgelida xaaladaha saldhigyada Ciidamada Booliska ee ka howlgalla qeybta Galmudug iyo wax ka qabashada baahida ay qabaan.
Booqashada uu Maanta taliye kuxigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif ku tegay Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay kusoo aadeysaa xilli Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ay la wareegeen Amniga Magaalooyinka,Dhuusamareeb iyo Guriceel halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen Ciidamada Ahlusunna Wal-Jamaaca.
← Dagaal culus oo dhex-maray Ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab → Al Shabaab attacks military base in Puntland